श्रीस्वस्थानी व्रत कथामा पीएचडी गर्ने अमेरिकी नागरिक डा.जेसिका भन्छिन – ‘श्रीस्वस्थानी व्रत कथा दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट व्रत हो’ « Niatra TV
श्रीस्वस्थानी व्रत कथामा पीएचडी गर्ने अमेरिकी नागरिक डा.जेसिका भन्छिन – ‘श्रीस्वस्थानी व्रत कथा दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट व्रत हो’
काठमाडौं, ६ माघ । वानोद वान्थाईन र केरोन वान्थाईनका सुपुत्री अमेरिका निवासी जेसिका वान्थाईन विरकेन्होल्ज अमेरिकाकै यूनिभर्सिटी अफ ईलिनोयसका सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँ पहिलो पटक साँखुमा सन् १९९९ मा आउनुभएको थियो जत्तिखेर उहाँ बीए पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँ सन् २००५, २००६, २००८ र २०१४ मा पनि केही दिनको लागि साँखुमा आउनुभएको थियो ।
उहाँले दक्षिण एशियाका महिलाहरुको परम्परा विषयमा विद्यावारिधी गर्नुभएको थियो ,यसै सिलसिलामा स्वस्थानी ब्रतकथामा पनि पीएचडी गर्नु भयो । त्यसै सिलसिलामा उहाँले साँखुको माधवनारायण स्वस्थानी व्रतको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत छ उहाँसँग साँखुका संस्कृतिप्रेमी प्रविणराज श्रेष्ठको घरमा संस्कृति परम्परा र माधवनारायण स्वस्थानी व्रतका विषयमा लिईएको समसामयिक अन्तर्वार्ता ।
तपाइँ पहिलोपटक साँखुमा कहिले आउनुभएको थियो ?
म सन् १९९९ मा पहिलो पटक बीए पढ्दै गर्दा साँखुमा आएको थिएँ । त्यत्तिखेर मैले दक्षिण एशियामा महिला परम्पराबारे अध्ययन गर्ने सिलसिलामा म यहाँ आएको थिएँ । पछि मैले दक्षिण एशियामा भाषा र सभ्यताबारे विद्यावारिधी ९पीएचडी० गरेको थिएँ ।
तपाइँ नेपालको कुन कुन सहर घुम्नुभएको छ ?
तपाइँले गर्नुभएको अनुसन्धान अनुसार सबैभन्दा पुरानो स्वस्थानी कति वर्ष पुरानो रहेको छ ?
–सम्भवत ४४१ वर्ष अगाडिको पुस्तक हुनुपर्छ । त्यो पुस्तक ने।सं। ६९३ को स्वस्थानीको पुस्तक हो । त्यसमा स्वस्थानीको व्रत सम्बन्धी पूजा विधीहरु २ दिन र १ रातको मात्रै वर्णन गरिएको छ । त्यसपछि ने।सं। ७२३ को स्वस्थानी पुस्तकमा भने १ महिनाको व्रत पूजाको वर्णन गरिएको पाएको छु ।
स्वस्थानी व्रतमा छुवाछुतको व्यवस्था तपाइँलाई कस्तो लाग्यो ? त्यहाँ विभिन्न जातिका मानिसहरुलाई अछुतको रुपमा व्यवहार गरेको पाईन्छ नि ।
म खुल्ला समाजको मान्छे । अनि म क्रिश्चियन धर्मावलम्बी त्यसैले मैले अर्को धर्म र संस्कृतिबारे बोल्दा अलिकति विचार पु¥याउनै पर्ने हुन्छ । तर पनि मलाई व्यक्तिगतरुपमा केही कुराहरु अप्ठ्यारो महसुस पनि भएको छ । मलाई लाग्छ यो परम्परा र संस्कृति पनि सदियौँ देखि अगाडि बढिरहेको र यहाँको समाजले स्विकारेको देखिएको हुँदा मलाई कुनै आश्चर्य लागेन । सम्भवतः यो व्रत पूजा चलाएको समयमा यस्तो खाले व्यवस्था जरुरी थियो कि । फेरि यो व्रत अत्यन्त कठिन व्रत भएको हुँदा यस व्रतपूजामा केही कठिन र गाह्रो साह्रो नीति नियम बनेको पनि हुनसक्छ । तर मैले त्यस्तो विशेष केही कुरा लिखितरुपमा भने पाईन । मैले अध्ययन गरेको समय १९९९ मा र आज २०१४ मा हेर्दा केही फरक महसुस समेत गरेको छु ।
स्वस्थानी व्रत पूजा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने क्रममा आफूलाई कस्तो महसुस भयो ?
तपाइँको अध्ययनमा स्वस्थानी व्रत र माधवनारायण बीच तपाइँले के सामञ्जस्यता पाउनुभएको छ ? अथवा कहाँनिर माधवनारायण र स्वस्थानी व्रत जोडिन गएको छ भनिदिनुस् न ।
स्वस्थानीमा वर्णित लावण्य देश कहाँ होला जस्तो छ ?
साँखु नगरी तपाइँलाई कस्तो लाग्यो ?
अन्त्यमा तपाइँले यस अनलाइन पत्रिकामार्फत् हाम्रा पाठकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?